Asteer Gannoo - Wikipedia
Guyyaa dhalootaa: 1872
Guyyaa du'aa: 1964
Asteer Gannoo (1872 - 1964) dubartii Macaafa Qulqulluu Onesmoos Nasib wajjin ta'uun Afaan Oromootti hiiktee. Macaafni Qulqulluun kunis bara 1899tti maxxanfame.
Asteer bilisummaa keessatti kan dhalatte yoo ta'u booda garuu mootii Limmuu Inaariyaattin gabrummatti gurguramte. Bara 1886tti dooniin Ixaaliyaa bidiruu ishiin itti fe'amtee gurguraaf gara biyya Arabaatti geeffamaa turtee qabee bilisa ishii baasan. Achiis gara Eertiraa ishii geessan; achitti manni barnoota wangeelaa Imkulluu kan Iswiidinootan geggeeffamu ishii fudhate. Asteeris mana barumsaa kanatti baratte. Onesmoos Nasib batalummatti Asteer kennaa sammuu fi jaalala Afaan Oromoo akka qabdu bare. Ishiittis galmee jechootaa Afaan Oromo (Oromo dictionary) akka qopheessitu dirqamni kennameef. Galmeen jechoota kunis hiikaa Kakuu Haaraa Macaafa Qulqulluu kan bara 1893 maxxanfamerratti faayidaarra oole.
Asteer kitaaba waa'ee Mcaafa Qulqulluu (book of Bible stories) Afaan Oromootti hiiktee. Akkasumas hiiphoo Afaan Oromoo 500 ta'an, mammaaksa, oduu durii fi faaruu/weedduu walitti qabdee bara 1894 maxxansite. Boodarrammoo Onesmoos wajjin macaafa weedduu/faaruu Afaan Oromoo qopheessurratti hirmaatte. Arén akka barressetti kuusaan aadaa ishiin walitti qabde baayyeen isaa kan hin maxxanfamne akka ta'ee fi maatii HYlander harka olkaawwamee akka jiru dubbate.
Asteeri fi Onesmoos Macaafa Qulqulluu guutummaasaa Afaan Oromootti hiikuu xumuruan, bara 1899ttis maxxansiisan. Mata dureeni fi seenaan macaafichaa kan hiike Onesmoos akka ta'e yoo ibsu gumaachi Asteer goote baayyee iddoon hin kennamneef, amma harraattiyyuu. Bara 1904tti, Asteer fi Oneimoos, Oromoota biraa wajjin, Eertiraadhaa ka'ani gara Wallaggaatti galan. Achittis manneen barnoota kan dhaaban yoo ta'u Asteeris Naqamtetti akka barsiiftutti tajaajilaa turte.
Dirshaye Menberu, "Onesimus Nesib", Dictionary of African Christian
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Asteer_Gannoo&oldid=24432"
This page was last edited on 18 Adooleessa 2014, at 17:02.